ကန်သမ္မတ ထရန့်နှင့် တူရကီ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ အိမ်ဖြူတော်၌ တွေ့ဆုံစဉ် ဝါရှင်တန်ရှိ တူရကီသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့က လူစုခွဲခဲ့ရ - Yangon Media Group
Main menu	Search ... HOT NEWS
ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံမဲ့ပြဿနာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ: ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၁ဝ မိနစ်တိုင်း ကလေးတစ်ဦးဟာ နိုင်ငံမဲ့အနေနဲ့ မွေးဖွားလာတယ်လ
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး: နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၂
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှ သံမှူး Mr. Yan
လီဝန်ဒေါစကီး၏ အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ပတ်သက်၍ မန်ယူ၊ ချဲလ်ဆီးအသင်းများကို ဖီဖာထံ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် တိုင်စာပို့မည်: ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှ အဓိကတိုက်စစ်မှူးဖြစ်သူ လီဝန်ဒေါစကီး၏အပြောင်း အရွှေ့နှ
မေဂျာလိဂ် ကလပ် ဂလက်ဇီသို့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ခ်ျ ပြောင်းရွှေ့ဖွယ် ရှိနေကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်: ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရပြီး မန်ယူအသင်း၏သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
မီဒီယာအပေါ် လျစ်လျူရှုခဲ့သည့် စီရော်နယ်ဒိုအား နည်းပြ ဆန်းတို့စ် ထောက်ခံပြောဆို: ပေါ်တူဂီနည်းပြဆန်းတို့စ်သည် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖလား အုပ်စုအဖွင့်ပွဲအပြီးတွ
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အဆင့် အာရှ-ပစိဖိတ် ရေညီလာခံကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်: ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၂
ကမ္ဘာ့အဆင့် အာရှ-ပစိဖိတ် ရေညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကအိမ
ကျွန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အမည်ဖြင့် ရိုက်ကူးခွင့် မပြုခဲ့ဘဲ ရိုက်ကူးခဲ့သောကြောင့် ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနက တရားစွဲမည် ဟုဆို: ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၂ ကျွန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမည်မှာ ရိုက်ကူးခွင့်မပြုခဲ့သည့
၆၆(ဃ) အာမခံ ရရှိရေးနှင့် ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ရေး သူရဦးရွှေမန်း ကော်မရှင် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ် ဟုဆို: ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၂
ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ ၆၆(ဃ)နှင့်ပတ်သက်ပြီး အာမခံရရှိရေးနှင
အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်တွင် အပူလှိုင်းဖြတ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး: လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ၊ ဇွန် ၂၂
အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်တွင် ပြင်း
မိုဆူးလ်မြို့ရှိ သမိုင်းဝင် ဗလီနှစ်ခုကို အိုင်အက်စ်တို့ ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး': ဘဂ္ဂဒက်၊ ဇွန် ၂၂
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့သိမ်းပိုက်ထားသော မိုဆူးလ်မြို
Yangon Media Group - The Yangontimes News & Flower News Journal HomeRegionalBusinessWorld NewsPoliticalInterviewArticleTravelReligiousEditorialAutomotiveEntertainmentScience&TechLifeOthersSports
18 May Published in
Read 649 times Written by
font size Print ,
Email ကန်သမ္မတ ထရန့်နှင့် တူရကီ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ အိမ်ဖြူတော်၌ တွေ့ဆုံစဉ် ဝါရှင်တန်ရှိ တူရကီသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့က လူစုခွဲခဲ့ရ Tweet ဝါရှင်တန်၊ မေ ၁၇
အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့်နှင့် တူရကီဝန်ကြီးချုပ်တို့ အိမ်ဖြူတော်၌ တွေ့ဆုံစဉ် ဆီးရီးယား၊ အီရတ်တို့ နှင့်ပတ်သက်သည့် တူရကီအစိုးရ၏ပေါ်လစီကို မကျေနပ်သောလူစုက အမေရိကန် ဝါရှင်တန်မြို့တော်ရှိ တူရကီသံရုံးရှေ့တွင် မေ ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြခဲ့သဖြင့် ရဲတပ် ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းခဲ့ရာ ဆန္ဒပြသူအချို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း CNN သတင်း ကပြောသည်။
ဆန္ဒပြပွဲကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းသောကြောင့် ဆန္ဒပြသူအချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြပွဲကို အချိန်တိုအတွင်း လူစုခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ တူရကီသံရုံးအရှေ့၌ ဆန္ဒပြပွဲကျင်းပနေစဉ် တူရကီဝန် ကီးချုပ် အာဒိုဂန်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ အိမ်ဖြူ တော်၌တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အမေရိကန်သမ္မတထရန့်က တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ကို ကြိုဆိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တူရကီတပ်ဖွဲ့များနှင့် အမေရိကန်ထောက်ပံ့သော ကာ့ဒ်သူပုန်အဖွဲ့များအရေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ တူရကီနိုင်ငံသည် နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆီးရီးယားရှိ IS တပ်ဖွဲ့များကိုတိုက်ခိုက် ရန် နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တူရကီ နိုင်ငံ၌ အခြေစိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အစွန်း ရောက်အကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲတွင် တူရကီ၊ အီးယူနှင့်အမေရိကန်တို့ ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ခေါင်း ဆောင်နှစ်ဦးတွေ့ဆုံစဉ်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ တူရကီသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသော ဆန္ဒ ပြသူအချို့ကို ဂျော့ဝါရှင်တန်ဆေးရုံ သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သတင်းဌာနအချို့ကလွှင့်တင်သော ရုပ်သံဖိုင်တွင် ဒဏ်ရာရသူအများ အပြားတွေ့ရှိရသော်လည်း ဘယ်နှဦးဒဏ်ရာရရှိသည်ကို အတိအကျမသိရှိရသေးကြောင်း CNN သတင်းက ပြောသည်။
Ref : CNN
#democracytoday	Rate this item
12345 (0 votes)	Tweet M ဘွယ် M-Bwel (Online Editor)	Latest from M ဘွယ်
အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်တွင် အပူလှိုင်းဖြတ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် သူပုန်သုံးဦးကို အိန္ဒိယ စစ်တပ်က သုတ်သင် အီရတ် မိုဆူးလ်တွင် ပြင်သစ် ဂျာနယ်လစ် တစ်ဦး သေဆုံး၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ မြောက်ကိုရီးယားမှ လွှတ်ပေးလိုက်သော အမေရိကန်ကျောင်းသား ကွယ်လွန် ပြင်သစ် ပဲရစ်မြို့တွင် ရဲယာဉ်တန်းကို ကားတစ်စီးဖြင့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်၊ တရားခံကို ရဲက အသေဖမ်းဆီး မိ More in this category:
« ဂျပန်မင်းသမီးလက်ထပ်မည့်အရေး တော်ဝင်မိသားစုအတွင်း အချေအတင်ပြောဆိုနေရ
ထိုင်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရခြင်း မရှိစေရေး အစိုးရနှင့် NGO များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဆို »
Login to post comments	back to top Latest Articles	ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၁ဝ မိနစ်တိုင်း ကလေးတစ်ဦးဟာ နိုင်ငံမဲ့အနေနဲ့ မွေးဖွားလာတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အနေအထား အရ နိုင်ငံသားရပိ...23-06-2017 Hits:31 Article လူဘုန်းမြတ်	နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၂
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှ သံမှူး Mr. Yang Shouzheng သည် နေပြည်တော်၌ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ြ...23-06-2017 Hits:20 Business DT	ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှ အဓိကတိုက်စစ်မှူးဖြစ်သူ လီဝန်ဒေါစကီး၏အပြောင်း အရွှေ့နှင့်ပတ်သက်၍ တရားမဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုများရှိနေခဲ့သည့် ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် မန်ယူနှင့်...23-06-2017 Hits:40 Sport WKM	ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရပြီး မန်ယူအသင်း၏သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း မခံခဲ့ရသည့် တိုက်စစ်မှူးအီဘရာ ဟီမိုဗစ်ခ်ျသည် အမေရိကန်မေဂျာလိဂ်သိ...23-06-2017 Hits:29 Sport WKM	Business Info
The Free Press isaCornerstone of Democracy. A Free Press, At its Best, Reveals Truth.
Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075 IT: 09 540 3616
PrivacyLegal PolicyTerms & Conditions